Yabancılar iyo BAE vatandaşları için Dubai'da işler 🥇
Shirkadda Dubai Dubai
Shaqooyinka Dubai ee Shaqaalaha Sri Lanka
Dubai ku shaqeeya
Dubai ku shaqeeya, BAE vatandaşları iyo yabancılar for 2019 ayaa ku shaqeynaya Dubai. Qeybtan waxaa ka mid ah BAE iyo Dubai ku shaqeynla xiriiriye. United Arab Emirates waxaa ku yaal shirkad, halkaas oo shaqo dalaggaga ah si aad u wanaagsan tahay. Yabancilar si aad ku habboon tahay doorashooyinka maxay tahay inaad ku faraxsantahay? Dhexdhexaadinta Shaqaalaha ee Xarunta Dhexe ee Shaqaalaha, BAE ayaa ku shaqeyn doona si aad u saameyn karto. Hase yeeshee, si aad u ogaato CV wixii aad ku qorto oo aad u sheegto lazım. Dubai ku noolaan iyo dadaal si aad u fiican.
Habka Ganacsiga ee iibinta iyo injineeriyada ilaa, Dubai oo kuyaala meel kasta oo ka mid ah. New foreign visitors visitors in Dubai si aad u hesho wax shaqo. Hase yeeshee, shirkaddaha Dubai ee shirkadaha ku jira ayaa kufaraxay in ay diyaarin doonaan ayada. Dahada, waa mid aad u fiican oo ku takhasusay arjiga codsigaaga. Sidoo kale waa inaad la xiriirto xafiiska shaqada si aad u heshid. Dhammaan macluumaadkaas waxaad ku qori kartaa qoraal ahaan. Kariyer danjireyaasha ka kooban ekibimiz, cusub oo ah jimcaha loogu talagalay beklemekte.
Dubai ee kuyaal beelaha
BAE in shaqo bulmaya çalışan stranger çoğu, waddanka oo kaliya ayaa ah dalxiis oo booqanaya. Hase yeeshe, badanaa wakhtiga, shaqo codsiga ah ee ku saabsan shaqo vizesi waa muhiim. Sababtan awgeed, in aan ku shaqeyno si aad u buuxsanto. Halkaan waxaad ka arki kartaa inaad ku faraxsan tahay. Fadlan ku soo dhawoow Xarunta Dhexe iyo BAE ee ku saabsan sida aad wax u baran laheyd si aad u aragto.
Dubai City Company, cusub iyo hadda jira, Shaqooyinka cusubi waxay ku caawinayaan caawinta. Adiguna waa mid ka mid ah, oo ku habboon noloshaada. Ekibimiz sizi Dubai'da çalışmaya davet ediyor; sosyal medya hesaplarımızda duran olarak yeni iş pozisyonları paylaşıyoruz. Sidoo kale, shirkadaha kale ee shirkadaha wada shaqeynaya si aad u fiiriso; tusaale ahaan Bayt.com, Monster Gulf Dubai ve CareerJet. Shirkadda Kurduğumuz oo ah shirkad shisheeye ah ayaa ku guuleysatey Dubai meelo kala duwan oo shaqo ku leh. Shaqo arayan herkese good şanslar.
Yabancılar for Dubai Shaqaalaha
Dubai ayaa ka jirta meel kasta oo ka soo jeeda meelo kala duwan oo ku habboon. Haddaad shaqo raadisid iyo shirkad ahaan waxaad ku dhiiri gelineysaa inaad heshid. Xirfadlayaal iyo khabiir ku takhasusay xirfadlayaal, gaar ahaan yurtii ka shaqeynaya bilawga bilawga ah, oo u kuurgalaya nolosheeda cusub ee nolosheeda. Dubai ku leh xirfadlayaasha, si aad u heshid. Tani waa xaqiiqda ah in aan aqoonsanno, dunida oo dhan aduunka aday aqbalo. Shaqe başladığımız günden beri, oo ah hay'ad caalami ah oo shaqo raadinaysa dhammaan alaabtada ay ku jirto. Shaqada aramaya cusub bilaablayanlar United Arab Emirates ayaa ku jira shirkadeena CV'ler iyo waliba yurt dibadda shaqo ku meelaynayaan.
Guud ahaan, United Arab Emirates, shaqo arayan yabancıların ana hedeflerinden biri. Sababta oo ah waddanka Carabta, Basra Körfezi'nin iskisindayer alıyor. Sababtan awgeed, Hintli ve Pakistani maamulayaasha si aad u heshid lokasyon. Dubai iyo Abu Dhabi, Oman iyo Sacuudi Carabiya iyo wadamada kale ee ganacsigooda ay ka mid yihiin. Labadan magaalo iyo komshu goboleedku aad ayey u wanaagsan yihiin. Sidoo kale, waddankiisa rasmiga ah ee Arapça. Sababtaas awgeed waa Katar iyo Suudi Carabiya si ay udoonayaan adaylar for, BAE waa bilow bilow ah.
Marka laga reebo BAE'yi markii ugu horeysay ee booqasho kuhadal ah ayaaba ay tahay inaad fiiriso iyo inaad u baahan tahay dhawr jeer oo aad leedahay. Maamulayaashu waxay u shaqeynayaan mas'uuliyiin, oo aad ka heshay dhowr buug oo dhowr ah. Qaar ka mid ah maamulayaasha cusub ee Dubai ee ku shaqeeya aramaya bilaa caawinaaya sababtoo ah yabancılar için United Arab Emirates'de iş fırsatları yakalamak görünüşte oldukça zor olabiliyor.
Harika kariyer si aad shaqo raadin situtes
Guud ahaan BAE ayaa shaqo ku heli kartaa si aad shaqo raadin u isticmaasho. Ekibimizin bu konuda, gaar ahaan yurt dib shaqo bilowlayacak adayları düşünerek hazırladığı birnäçe detaylı rehber var. Si kastaba ha ahaatee, hoos ku xusan bogagga ka mid ah qaar ka mid ah dokindik. Si kastaba ha ahaatee, waa mid ka mid ah shaqsiyaadka ka shaqeeya boggooda badan oo badan. Ku codsigelinta jawaabta% 2-% 3 ku dhowaadaa iyo si aad u qiimo yar. Wixii warar ah ee aad ka heshay, shirkadda aad rabto olmayabiliyor iyo shaqo bini'aadinimigeeda kuguma soo halgami olasılık da var. Kusoo dhawoow mektubkaaga iyo CV ee aad u soo dirtay si aad u taxadar Olmalısınız çünkü dünyanın her yerinde çok dolandırıcılık şirketi var.
Yine de, shirkadda Dubai City ayaa si kalsooni leh uga qayb qaadaneysa tijaabooyinka loogu talagalay. Boggaga internetka ee shaqo raadinta iyo portalsine waa inaad ku qortaa waana in aad ka fiirsataa sababtoo ah sababtoo ah wixii aad ka soo bixi lahayd ma garan kartid. Kendiniz a anda Orta Dhexe waxaad heli kartaa. Sababtoo ah gaar ahaan Dubai, wax fudud oo ku saabsan ama ku xiran tahay, waxaad u baahan tahay shaqo ku beddelasho iyo inaad isla markiiba ka shaqeyso. Shaqooyinka raadiyaha guud ahaan istihdam si aad u heshid shaqo cusub oo aad waxtar u leh; Dubai ayaa ku yaal meelo kala duwan oo shaqo. Intaa waxaa dheer, kuwaasi oo ay ku siinayaan falanqeeye cusub.
Yabancilar how iş bulabilir?
BAE waxaad shaqo raadin ku saabsan ku saabsan aqoon badan
Yabancılar iyo BAE vatandaşları için Dubai'de işler
Gulf Talent ku saabsan: Körfez goobta ugu wanaagsan goobaha ka mid ah iyo guud ahaan, si aad u wanaagsan oo shaqooyinka ka buuxda. Maalin kasta dalalka Körfez iyo Katar iyo Abu Dhabi ee bannaanka u furan. Qaar badan oo ka mid ah boggan ayaa ku jawaabay in Dubai lagu shaqeeyay.
Bayt ku saabsan: Dhaqdhaqaaqa Ameerika Yabancılar ayaa si gaar ah loogu talagalay iyo guud ahaan ugu wanaagsan shaqo raadinta ka mid ah. Waqooyiga Bari iyo Hindisaha India, oo ah dhammaan caalamka maamulayaasha CV'ler si aan u dirno.
Edrrabia ku saabsan: Shirkadan ayaa ah mid ka mid ah shirkadaha ugu kobcaya. Ujeedooyinka guud, waa in aad ka shaqeysiisaa dhammaan adaylara waxbarasho. Google ee ku yaala meelo badan oo ka mid ah shirkadaha ku yaal, oo badan oo shaqo ah. Sidoo kale shaqo raadis ah oo ku saabsan siyaado ah.
Dubizle ku saabsan: shirkadan, gaar ahaan Dubai oo ka mid ah kuwa ugu sareeya ee ku yaala cinwaanada midkood. Ku baayacmushtarka shaqa raadinta si aad u ogaato. Sektöre 2005 ee ku soo biiray Dubizle, oo ahaa waqtigii ugu weynaa ee aad ku guulaysatay iyo bogga lagu daray shaqo ilan maalin kasta kor u kaca. Xataa shaqo raadiyaha iyo shaqaaleeyaha si aad u faa'iido leh.
Monster Gulf xuquuquna: Boggaan waxaad ka heleysaa boggeeda internetka Sababtoo ah shirkadu aad bay u badan tahay, taas oo ay ka badan tahay in ka badan iyo aad u sareeya aad ka heshay, in almost immediately all employers this site is member oluyorlar.
Glassdoor ku saabsan: Aslında this company, Dubai iyo Abu Dhabi ganacsiga fursadaha ay ku faafinayaan bilawga cusub. Sitenin özelliklerinden biri, shaqo ilan yayinlayan firmaların kullanıcılar puanlanabilmesi. Sidoo kale, ganacsatada ku takhasusay xirfadlayaasha ah ee aad adaylar waxay ku fadhidaa meel aad u habboon.
Xirfadda Shaqada ku saabsan: Boggani, kariyer raadiyeyaasha dhexdooda inta ugu horeysa ee ka soo baxa mid ka mid ah iyo shaqo ku siman heerkastoo ay dhacayso, BAE ayaa ku shaqeyn kartaa boggan. Sidoo kale, si gaar ah ayaa loo qorsheeyay nidaamyada internetka oo ku shaqeynaya si aad u fudud.
Shaqooyinka Dubai ku saabsan: Buuggan, boggan cusub ee shaqo raadsiga. Portal Akıllı Dubai Hagar Dastuuri ah ayaa kor u qaaday horumarinta, yani si aad u kalsooni uugu sheegto. Munaasabad cusub oo lagusoo gooyay mid ka mid ah ganacsatada UAE.
Reed ku saabsan: Waa kan ugu weyn ee shaqo raadsiga mid ka mid ah ama United Arab Emirates'da ee shaqooyinka furan ee ku saabsan shaqooyinka iyo sidoo kale. Ingiriis vatandaşları ve diğer uluslardan adaylar bu işe yeni iş fırsatlarına başvurabilir. Sidoo kale sitada shaqo ku qorida ingiriiska sterlini ile hesaplanıyor, yani xaqiiqo raadin qiimo raadin.
Dhab ahaantii ku saabsan: Boggan interneetka ah ee shaqo raadinta ku dhex jira ugu horeyntii saddexda meel iyo shirkadaba maalin kasta ayaa sii kordheysa. 2019 ee sanadka 200 booqashadii ay gaadhay iyo ay cusub xubnaha diiwaangelinta.
Naukri ku saabsan: Dubai City Company, dhamaan caalamka adaylara waa caddayn Naukri'i guides guides yer. Bogga interneetka ee dibedda ee dalabyada ku saabsan adreesyada, Hindiya, UAE iyo Katar'dan shaqo ilansuyla full. Meelo kale oo laga soo iibsado gudaha ayaa si joogto ah loo cusbooneysiinayaa.
Liamoon Ku saabsan boggan: Buuggan oo ah mid aad u xiiso badan oo ka mid ah shirkadaha tooska ah ee tooska ah ee shirkadaha internetka ka soo ka soo ururiyo iyo Qatar iyo Sacuudi Carabiya ayaa shaqeynaya da.
Yabancilar for Dubai in shaqo aramak kârlı?
United Arab Emirates'da, ajandayaasha ingiriisiga ah ee ku hadla af ingiriisiga, shaqooyinka kala duwan. Hase yeeshee, si fiican u shaqeynaya, Arapçayı çok iyi konuşuyor olmalısınız. Haddii aadan kufaraxsanayn ama ku filan tahay inaad shaqeyn kartid, waa inaad ku qortaa xafiiska hoose ee ganacsiga. Halkaan ka akhriso boggaga internetka ee ku yaala Dubai ayaa laga yaabaa in badan oo shaqo ah laakiin Arapça bilmeyenler üçin istihdam olasılığı maalesef pes.
Mid ka mid ah waxyeelo badan, inkasta oo buuggani yahay mid aad u tiro badan oo shaqo laguu heli lahaa. Tani waxay sabab u tahay iyada oo ka mid ah dad badan oo ka mid ah dadka ay ujoogayaasha ah ayaa uollayabiliyor. Maalmaheeda gudaheeda bogeheeda waa iyada oo ujeedkeedu yahay vasıtasıyla, kuwan cusub aday codsiga ku jira. Olumlu yari balaaranak, Dubai oo ah dhowr sano ka hor ayaa si dhaqso ah ugu soo kordhay iyo ingiriisi BAE ee muhiimka ah dillar mid ka mid ah geline. Sababtan awgeed, United Arab Emirates'ndeki shaqooyinka kala duwan ee caalamiga ah lagala soo bixi karo artmakta. Sidaas awgeed ajaanibta Dubai ayaa ku haboon in ay sii korodho. Yurt ka baxsan shaqo cusub oo bilawga ah in ay sii galaan BAE'da shaqo wanaagsan oo ay ku rajo helayaan iyo Basra Körfezi oo ku yaala wadamo kala duwan oo kala ah yabancılar si aad u hesho guryo cusub.
Sharciyada Dubai ee kuxiran
BAE, dunyadaki en güzel yerlerden biri. Hase yeeshee, Sharciga Sharciga ah ee Sharciga Qodobka Sharciga ah ee Qaar ka mid ah Qaar ka mid ah Dhibaatooyinka ku adkaysiga iyo wixii dhici doona, sharcigaan waa la raacayaa. Shaqaalaha ajnabiga ah ee ku saabsan dhibaatooyinka nolayabilay. Shaqada Abu Dhabi ama Dubai ku soo gala cusub oo ku saabsan nolosheeda bilaabay, addeeca u adkeysiga adag iyo in muddo gaaban gudaheed, hapis cezası alıyorlar. Sidaas darteed BAE, waddan kale oo ka shaqeeya waddan kale oo ku saabsan dalka Tani dhab ahaantii adeeg iyo adeegga dembiileedu hoos bay u dhacaysaa.
Yine de, Dubai ku cusub cusub ayaa ku jira tusaalayaal. Yabancı turistler yasaları çiğneyip, ayaa laga yaabaa in ay ka mid noqoto hawlaha ay ka shaqeynayaan, laakiin waa mid aad u adag. Halka furan oo aad ka heli kartid iyo Facebook'tan uygunsuz paylaşımlar samee yasak. Xeerka furan ee ku jira isticmaalka qaaska ah sida isticmaalka qarsoodiga ah. Maalesef, waa inaad ka soo horjeedaa mid ka mid ah (haddii aanad kalsooni lahayn) isku mid ah qolka qolka.
Dahada, Dubai makamları qaarkood xaaladaha adaletsiz davranabiliyor. United Arab Emirates hükümeti, iyada oo marmar baaritaanka furashada waddlarını arıyorum. Yabancıların Şeriat yasasına uygun olmayan habranışlarda bulunması hiç izin verilmiyor. Waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo loo yaqaan 'bilaysak' Tusaale ahaan, Duba iyo Abu Dhabi hoteller ayaa ka mid ah labada marood ee ku habboon. Halbuki Dubai dadweynaha halkan si caadi ah u codso. Ustelik Bae'da ka mid ah midabkeedu waa nolol nolol. Tani waxay u egtahay in tuhaf yimaado, laakiin xaqiiqda Yurubiyaanka ah ee dadka shaqeeya ayaa si cad u qotonta dadka cusub aradikes gay barlar iyo habeenkii kulüpler xitaa mecut iyo noocan UAE iyada oo ah meel ay caalamka u adeegto si ay u helaan si ay u furaan.
Yabancey Shaqaalaha loogu talagalay Dubai
Dunida ka jirta meel kasta oo ka soo jeeda ajanabi Dubai wax badan oo shaqo ah ayaa laga helaa. Dad badan, gaar ahaan maamulayaasha, Halkaan waxaa ku yaal fudud kolayla shaqo. Dikkat edilmesi waa in ay ka mid noqdaan noloshooda, Dubai iyo Abu Dhabi ee qaabka nolosha. Booqashadii ugu horeysay ee BAE'yi booqdayaashaa, qaar ka mid ah xeerarka waa in ay waajibaadka ay unutmamalılar. Hoosta, Dubai oo ah maamulayaasha kuugooba furitaanka. Dubai Airports, hotels iyo automotive industry bu konuda başı çekiyor. Dhamaan goobahan, Shaqaale Pakistani ah oo ka shaqeeya Hindiya si aad u tiro badan shaqaale cusub. Shirkadda caalamiga ah ee ku taal adaylara kesinlikle Dubai'yi booqashadooda iyo yurt ka shaqeynaya bilowlamalarını waantaminayaa.